Dad saf ugu jira baaritaanka cudurka COVID-19 gudaha magaalada Beijing, ee dalka Shiinaha.
Kiisaska dadka qaaday cudursidaha Coronavirus ee caalamka ayaa kusii siqeysa 100 milyan, sida ay Sabtida maanta ah ku warrantay jaamacadda Johns Hopkins oo diiwaangeliysay in ka badan 98 milyan oo kiis.
Dalka Biljimka, afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay, in cudurka uu wali fara ba’an ku hayo caalamka, balse rajada ay qabaani ay tahay tallaalka iyo xilliga guga oo dhulka qabowga ahi helaan cimmillo kulul.
Bilgimka ilaa iyo hadda waxaa xanuunka COVID-19 ugu dhintay in ka badan 20 kun oo qof.
Dalka Shiinaha, waxaa la xiray qeybo ka mid ah Hong Kong sababo la xiriira baaritaan baaxad weyn oo ay dowladdu ku sameyneyso dadka ku nool degmada Jordan, halkaas oo bishaan gudaheeda laga helay ilaa 162 kiis oo xanuunka la xiriira.
Saraakiisha caafimaadka Jarmalka, ayaa maanta sheegay in inkastoo uu cudurka Covid dilay dad ka badan 50,000, ay hadana faafista cudurka hoos u dhacday.